हामी TWS AUKEY EP T25 हेडफोन विश्लेषण गर्दछौं ग्याजेट समाचार
AUKEY EP T25 हेडफोन समीक्षा
आज हामी फेरि प्रयास गर्न भाग्यशाली छौं AUKEY हस्ताक्षर वायरलेस हेडफोन। यस अवस्थामा हामी परीक्षण गर्छौं EP T25, यो प्रशस्त निर्माताको अर्को मोडल जसले हामीलाई देखाउँदछ एक शारीरिक पक्ष जुन हामीलाई धेरै परिचित छ। बजारको लागि एक नयाँ विकल्प जुन आज हामी तपाईंलाई के सोच्दछौं बताउन विस्तारपूर्वक विश्लेषण गर्दछौं।
यदि तपाईं "परम्परागत व्यक्तिहरू" मध्ये हुनुहुन्छ जो अझै पनि केही तारयुक्त हेडफोनहरू झुण्ड्याएर जान्छ, यहाँ तपाईले भेट्टाउनुहुनेछ चाखलाग्दो विकल्प। रमाइलो गर्न सक्षम हुनुहोस् एक गुणवत्ता उपकरण संग तपाईंको मनपर्ने संगीत र बोक्नको लागि धेरै सजिलो छ जो कोहीलाई उपलब्ध छ.
1 AUKEY EP T25 TWS हेडफोन तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो?
2 AUKEY EP S25 अनबक्सिंग
4 AUKEI EP T25 हामीलाई के प्रस्ताव गर्दछ?
5 AUKEY EP T25 प्राविधिक प्रदर्शन तालिका
AUKEY EP T25 TWS हेडफोन तपाईंले खोजिरहनु भएको थियो?
हालसालैका वर्षहरूमा हामीले ध्वनिसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बाढी देख्यौं। बेकारमा छैन, lसंगीतसँग सम्बन्धित ती स्मार्टफोनका लागि सब भन्दा बेच्ने र प्रयोग हुने ग्याजेटहरू हुन्। ब्लुटुथ स्पिकर र वायरलेस हेडफोन त्यहाँ सयौं छन् (यदि हजारौं होइन)। आज हामी ती मध्येका एकलाई हेर्छौं, र कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।
AUKEY लिनुहोस् २०० since देखि स्मार्टफोनमा सिधा लिंक गरिएका सामानहरू सिर्जना गर्न आफूलाई समर्पण गर्दै। र ती मध्ये धेरैले ध्वनि र संगीतसँग पनि सम्बन्धित छ। हामी यस कम्पनीका धेरै मोडेलहरू परीक्षण गर्न पर्याप्त भाग्यशाली छौं, र हामी सबै भन्न सक्छौं कि तिनीहरू न्यूनतम गुणवत्ता मापदण्ड पूरा। र यो मूल्य संग एक राम्रो सन्तुलित सम्बन्ध संग।
AUKEY T25 EPs सुविधा ए सुन्दर आकार बजारमा सब भन्दा प्रसिद्ध हेडफोनमा, एप्पल एयरपड्स प्रो। जे होस् अर्को र color्गमा, र कम कपटी आकांक्षाहरूको साथ, तिनीहरू पनि आइपुगेको छ भनेर उल्लेख नगरौं धेरै सस्तो मूल्यको साथ। तैपनि, ती अझै पनी हडताल गर्दै छन् र कुनै पनि अन्यको लागि सही विकल्प हो।
AUKEY EP S25 अनबक्सिंग
तपाईले बाकस भित्र हेर्नु पर्छ तपाईलाई सबै तत्वहरू बताउन जुन हामी भित्र पाउन सक्छौं। को रूप मा अनबक्सिङ हेडफोनबाट हामी कुनै ठूलो आश्चर्यको अपेक्षा गर्न सक्दैनौं। हामी भन्न सक्दछौं कि सबै छ र हामी केहि याद गर्दैनौं। हामीसँग स्वाभाविक रूपमा छ हेडफोन र उनीहरूको सम्बन्धित चार्जर बक्स.
तार्किक तत्त्वका साथै हामी यो पनि हेर्दछौं कि कसरी AUKEY ले यसको प्रत्येक मोडलमा समावेश गर्न जारी राख्दछ दुई अतिरिक्त कान प्याड को सेट। त्यसकारण हामीसँग विभिन्न आकारका तीन सेटहरू छन्। A उत्तम सम्भावित सुन्ने अनुभवको लागि आवश्यक तत्व। सही कान प्याडको साथ हेडफोनले अडियो गुण र आवाज घटाउनमा धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ।
सानो बाहेक थप थप्न "केस चार्ज" चार्ज गर्न केबल, जो छ USB प्रकार सी ढाँचा। केहि चीज जसले चार्जिंग छिटो र अधिक कुशल बनाउँदछ। हामीसँग विशिष्ट वारेन्टी कागजातहरू, र छोटो छोटो गाईडहरू पनि छन्।
हामीले केहि भेट्टायौं धेरै सानो आकारको हेडफोन। तिनीहरूसँग तथाकथित "बटन" ढाँचा छैन, किनकि तिनीहरूसँग लामो बनाइएको भाग छ जुन कानबाट तल झर्छ। र यद्यपि शारीरिक रूपमा हामीले टिप्पणी गरेका छौं कि तिनीहरू एयरपड्स प्रोमा ठूलो समानता राख्दछन्, हेडसेटको बाह्य आकार अधिक कोणीय र कम गोलाकार आकारहरू.
यस प्रकारको हेडफोनको सम्बन्धमा, हामी त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्षम भएका छौं कल अडियो एक टुक्रा हेडफोन भन्दा राम्रो देखिन्छ त्यो कान भित्र रहन्छ। नियमको रूपमा, माइक्रोफोन विस्तारित भागको अन्तमा सम्मिलित हुन्छ। केहि आवाज जसले अझ राम्रो बनाउँदछ, विशेष गरी उनीहरूको लागि जसले हामीलाई अर्को छेउबाट कुरा गर्छन्।
हेडसेटको भित्री विशेषताहरु ढाँचा "इन इयर" भनिन्छ। यस कारणका लागि, यससँग राम्ररी ज्ञात "रबर ब्यान्डहरू" छन् जुन श्रवण मंडप भित्र रहन्छ। एक ढाँचा जुन अधिक र बढि फैलँदै छ र त्यसमा दुबै अनुयायी र निषेधकर्ताहरू छन्। सही प्याडको साथ राम्रोसँग प्रयोग गरिएको छ, ध्वनि अनुभव धेरै राम्रो मानिन्छ। यसको लागि हामी प्याडहरूको तीन फरक आकारहरू भेट्टाउँछौं।
La "चार्ज केस" हामीलाई यसको लागि खासै मनपर्‍यो आकार यति सानो छ। साँच्चै हो खल्तीमा बोक्न सहजवा हेडफोनको स्थितिलाई धन्यवाद जुन तिनीहरू कान प्याडको साथ पछिल्लो रूपमा आराम गर्दछन्, आकार धेरै चापल हुन्छ। तिनीहरूसँग एउटा छ सानो एलईडी प्रकाश कि एक धेरै दृश्य तरिकामा चार्ज स्तर इंगित गर्दछ.
Su यति सानो आकार र कम तौल सँगै सेटको २ 25 घण्टा कुल स्वायत्तताs तिनीहरूलाई आदर्श साथी बनाउनुहोस्। उनीहरूसँग छ USB प्रकार-सी ढाँचा चार्जिंग पोर्ट, सब भन्दा हालका स्मार्टफोनहरूसँग धेरै जसो केबुलहरूसँग अनुकूल छ। तिनीहरूसँग एक उत्तम होल्ड र लोडको लागि एक चुम्बकीय समायोजन छ जबकि तिनीहरू केस भित्र छन्। हामी हेर्दछौं, त्यहाँ कारणहरूको कुनै कमी छैन कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्। एक बुद्धिमान छनौट हुन।
AUKEI EP T25 हामीलाई के प्रस्ताव गर्दछ?
AUKEI हेडफोनले सुपर-भीड बजारमा आफ्नो लागि नाम बनाउँदैछ। असंख्य नक्कल र कम-गुणवत्ता उत्पादनहरूमा, त्यहाँ केही निर्माताहरू बाहिर खडा छन्। सस्तो मूल्यमा गुणस्तर उत्पादनहरू फेला पार्न यो सजिलो छैन.
T25 EPs सँग एक छ २ 25 घण्टा कुल स्वायत्तता। यस्तो चीजले अरूले के प्रस्ताव गर्न सक्दछन्, र त्यस्ता साना हेडफोन र केसहरूमा ध्यान आकर्षण गर्दछ। को टच टेक्नोलोजी, भौतिक बटनको आवश्यकता बिना, तिनीहरू सामानको उच्च सीमाको योग्य छन्, अझ बढी जब हामी तिनीहरूको मूल्य विचार गर्छौं।
हामी पहुँच गर्न सक्दछौं असीमित एक स्पर्श नियन्त्रणहरू, दुई कुञ्जीस्ट्रोकहरू, तीन कुञ्जी स्ट्रोकहरू, वा एउटा लामो प्रेस। संगीत बजाउने, यसलाई रोक्ने, ट्र्याक अगाडि बढ्ने, पछाडि फर्केर जाँदा, ह्या hanging्ग अप गर्ने वा कल टिप्ने हाम्रो फोनलाई छुनु बिना सम्भव छ।
हामी संग छ ब्लुटुथ 5.0.२ जडान, जोडी जोडीमा छिटो जडानको ग्यारेन्टी गर्दछ र संकेतमा अवरोधहरूको अभाव। हामीले भेट्टायौं वास्तवमा राम्रो ध्वनी गुणस्तर। हामी गहिरो बास राम्रोसँग भिन्नता गर्न सक्दछौं, र राम्रो परिभाषाको उच्च परिभाषाको आनन्द लिन सक्छौं। को भोल्यूम स्तर पर्याप्त छ, हामी परीक्षण गर्न सक्षम भएका अन्य मोडेलहरू भन्दा बढी शक्तिशाली। हामी एक प्राप्त कलको बखत स्वीकार्य नतिजा टेलिफोन कलहरू।
AUKEY EP T25 प्राविधिक प्रदर्शन तालिका
मोडेल EP T25
हेडफोन ढाँचा कानमा
पानी र धुलो प्रतिरोध IPX5
स्वचालित जडान एक चरण जडान
टच नियन्त्रण SI
भर्चुअल सहायक अनुकूलता SI
हेडफोन स्वायत्तता एक चार्जमा hours घण्टा सम्म
कुल स्वायत्तता 25 घण्टा
वजन 35.1 g
आयामहरू 10.8 x 9.2 x4सेमी
प्रमोशनल मूल्य 25.99 €
लि link्क खरीद गर्नुहोस् कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्।
को सम्भावना हेडफोन छुट्टै प्रयोग गर्नुहोस्.
आकार धेरै कम्प्याक्ट र धेरै कम तौल।
उनीहरूसँग छ ध्वनि गुण मयू बुएना।
La गुणस्तर र मूल्य अनुपात यो उत्कृष्ट छ
तिनीहरू छुट्टै काम गर्दछन्
ढाँचा "कानमा" अझै पनि केही प्रयोगकर्ताहरूको लागि नकारात्मक छ।
त्यहाँ केवल एक संस्करण छ रंग कालो
र Color विकल्पहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » AUKEY EP T25 हेडफोन समीक्षा
तपाईंको कम्प्युटरमा संगीत वा भिडियोको साथ सीडी कसरी जलाउने
Huawei MatePad, विश्लेषण: एक ट्याब्लेट जुन आईप्याडमा खडा हुन्छ